Taratasin’I Jean Hisenina indray
Manao akory ianao Jean ! Dia tena tsy mety leon’ity manao kivalavala ity mihitsy moa izany ianareo an !
Ohatry ny maha te hanontany mihitsy anie ny zavatra hitan’ny maso hoe fa vao omaly ve ry Jean itony no nitondra sa ahoana ? Na koa hoe mba nivoaka tany amin’ny sekoly sy toeram-piasana taiza ary ry Jean itony nialoha ny nahatongavany teo ? Fa izaho ry Jean tena gaga mihitsy omaly naheno an’i Marco be ronono nilaza tamin’ny mpiara-miasa aminy hoe mitavozavoza fa hay ianareo no tena tiany notenenina kay. Hatramin’izao ve ianareo ry Jean dia tsy mahalala izany foana hoe ny lanonana tahaka an’io hokarakarainareo anio io anie ka ilana taratasy fanasana mihitsy ho mari-panajana fa tsy ataotao fahatany toa an’io fotsiny e ! Sady fanajana ny vahoaka entinao izany no fanajana ny be palitao toa anareo koa. Aleoko aloha tonga dia mampandre anao mialoha hoe hisenina indray anie ianareo raha mbola manohy io fomba fanaonareo io ary dia ho afa-baraka amin’izao tontolo izao mihitsy ee! Efa kivotambotany daholo mantsy ny zavatra rehetra hatrany am-boalohany dia mbola hatao toy izany koa ve ny aty am-pamaranana aty ?